फ्रेवुअरी 11, 2019 फ्रेवुअरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments गल्ती, डा. राम बहादुर बोहरा, दुर्घटना, मानिस
मानिसले गरेको सानो गल्तीले निम्त्याउछ ठुलो दुर्घटना । एउटा आमाले बच्चा जन्माउनु पुर्व आफु स्वास्थ्य हुन आवश्यक छ । धुम्रपान जांड रक्सी खाने आमाले जन्माएको सन्तान क्यान्सर रोगी भएर जन्मन्छ । आमा बुबाले गरेको गल्तीको सिकार त्यो अबोध बालक हुन पुग्छ ।
के गल्ती गरेको थियो त्यो अबोध बालकले जसका कारण उ जीवनभारी औषधिको सहारामा बाँच्नु पर्नेछ । तपाईं किन पढदै हुनुहुन्छ जागिर खान ? जागिर किन खाने पैसा कमाउन ? ठिक छ पैसा किन कमाउन पर्यो बाँच्नका लागि ? बाच्न किन पर्यो त ? मान्छे भएकाले हुन सक्छ ।
मान्छे भएर जनावर जस्तै भएर बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन । पशुलाई खान पाए हुन्छ उसलाई कुनै कुराको चिन्ता हुदैन तर एउटा मानिसको जन्म भएपछि हजारौं जिम्मेवारी उसको काँधमा आएको हुन्छ । यी सवै प्रश्नको उत्तर गहिरिएर सोच्नुहोस हामीले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै पछुतो मान्दै जान्छौं ।
शिक्षा पाएर पनि हामी खाली बस्छौ भने शिक्षामा गरेको लगानीको अर्थ नै के रहयो र । एउटा शिक्षकले कलासमा पुग्दा चुरोट पिउदै जान्छ भने उसले दिन खोजेको शिक्षा के होत ? एउटा सानो बालकले गुलियो पदार्थ मन पराउछ भने त्यो लत छोडाउन पहिले आफ्नो बानी सुधार्न सक्नुपर्छ र त्यो बालको बानी सुधार्न सकिन्छ ।
सानातिना रोग लागेर नेताहरू आफ्नो रोग जचाउन विदेशमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर पुग्छन् भने यिनले जनतालाई के सिकाउछन् त ? ठूलो मानिसले गरेको काम नै सानाका लागी मार्गदर्शन हुन सक्छ । स्वदेशमा नै भिआइपीको लागि राम्रो सुबिधा हुँदाहुँदै विदेश पुग्ने परम्पराले जनतालाई शिक्षा दिनुको साटो ऐयासीमा नेतृत्वले धकेल्दैछन् के यो जायाज छ त ?
← स्वास्थ्यको लागि आँप खानुका फाइदाहरु
हिस्टेरियाको लक्षण, उपचार तथा रोकथाम →
स्वस्थ रहौं अरूलाई स्वस्थ रहन आग्रह गरौं
अक्टोबर 24, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
2 thoughts on “मानिसले गरेको सानो गल्तीले निम्त्याउछ ठुलो दुर्घटना”
Pingback:बाबुआमालाई सम्मान गर्ने गरौ नत्र होला पछुतो
Pingback:चालक र उसको दायित्व